“Barcelona marna ma heli doonto Neymar oo kale.”. Zidane – Gool FM
“Barcelona marna ma heli doonto Neymar oo kale.”. Zidane
Byare August 12, 2017
(Madrid) 12 Agoosto 2017. Zidane ayaa diiday inuu Quursado Barcelona oo Neymar la’aan ah, balse wuxuu qiray inay ku adkaan doonto inay booskiisa buuxiyaan.
Real Madrid ayaa berito u safri doonta Camp Nou si ay ugu soo ciyaarto lugta hore ee Supercopa de Espana, macallinka reer France ayaana diyaar u ah inuu wajoho qofkasta uu Ernesto Valverde u doorto inuu ku soo buuxiyo booskii uu ka baxay Neymar kaa oo 222 milyan ugu biiray PSG.
“Qofkasta oo beri ka ciyaara booska Neymar ma noqon doono sidiisa oo kale, maxaa yeelay aad ayuu u fiican yahay, laakiin si fiican ayay sameyn doonaan,” Zidane ayaa sidaa yiri.
“Ma jiraan ciyaartoy badan oo ah sida Neymar oo kale.
“Taa caksigeeda, waxay sameeyeen isbadelo, laakiin ugu dambeyn Barcelona waa Barcelona uun.
“Waynu ognahay sida ay u ciyaarto taasna ma is badeli doonto, qorshahooda isma badeli doono.
“Waxaan iri ma jiro qof sida Neymar oo kale ah, waa mid aan la buuxin karin booskiis, laakiin waxaa jira mid kale oo iman doona si fiicanna yeeli doona. Waan qaldannahay haddii aan ku fikirno inay berito sahal inoo noqon doonto.
Zidane oo wax laga waydiyay xiddigaha uu la soo shir tagi doono kulanka beri iyo haddii uu Ronaldo diyaar yahay ayaa ku jawaabay:
“Berito ayaad arki doontaan, dhammaan waan fiicanahay jir ahaan iyo maskax ahaanba.
“Qofkasta wuxuu doonayaa inuu ciyaaro wayna fiican tahay midaa, sidaa darteed waa inaan dooq sameeyaa.
“Cristiano Ronaldo waa diyaar. Wuu fiican yahay, fasax ayuu soo qaatay, inkastuu maalmo yar nala joogay misane si adag ayuu uga shaqeeyay taam ahaanshihiisa waana diyaar.
Soo noqoshada Ronaldo waxay dhammeystireysaa weerarka la magac Baxay BBC ee ka kooban, Bale Benzema iyo Ronaldo taa oo meesha ka saareysa Isco oo baryahan wacdaro dhigaya.
Zidane oo ka hadlaya sheekadan ayaa yiri:
“Way isla jaan qaadi karaan, waa inaan qaabeeyaa, laakiin waa la sameyn karaa.
“Ma sameyn karo waxyaabo badan, sidaa darteed waynu arki doonaa sida aan beri wax u qorsheeyo.
Zidane ayaa kal ciyaareedka cusub durba jeebka ku soo ritay UEFA Super Cup ay ka soo qaadeen Man United, berina waxay Supercopa Spain ku wajahi doonaan Barca, Zidane oo ka hadlay ayaa misane yiri:
“Waa Supercopa waxayna leedahay qiimo gaar ah maxaa waaye waa koob kale.
“Waan ognahay inuu koobka micno gaar ah yeelanayo markaad ka dhacsaneyso Barcelona, sida ay dad badan aaminsan yihiin waa kulan aan kala hor tageyno kooxda aan sida ugu wayn u xifaaltano, laakiin aniga ahaan waxba ma badaleyso.”.
Abdisamed Mohamed Hassan.
"Olivier Giroud kama tagayo Arsenal" - Arsene Wenger
EPL: Watford oo barbaro ku celisay Liverpool, xili uu shabaqa soo taabtay Salah + SAWIRRO